Nhau - BXL Yakasikwa Won 4 Packaging Dhizaini Maporesi paiyi Mobius Kushambadzira Mubayiro Makwikwi
BXL Yakagadzira yakahwina "Akanakisa Anoshanda Mubayiro" uye matatu "Goridhe" ekurongedza dhizaini pa2018 Mobius Kushambadzira Makwikwi emakwikwi, achiisa rekodhi rakanakisa mumakore makumi maviri muChina. Ndiwo chete mubayiro unohwina mubairo muAsia.
Pfungwa yeiyi dhizaini inobva kuzvivakwa zvine hukama nehupenyu. Kunze kurongedza kwakaratidza chimiro chechivako nemapoinzi maviri. Kutanga, Huanghe Lou ine yakasarudzika ficha. Kechipiri, pane chiChinese chinoti "Hupenyu hwakafanana nekukwira masitepisi echivako". Yakasiyana pasi ine maonero akasiyana. Vagadziri vanotyora kokorodzano uye vanogadzira chiratidzo chakanakisa chekuona pachinzvimbo chekufarira ruzivo. Iyi dhizaini yakapusa asi isiri nyore uye inoyevedza uye isinganzwisisike nezvinhu zvekare. Zita rayo rezita rinopawo vatengi fungidziro yakanaka.
Kusvikira nhasi, takakunda huwandu hwenyika makumi manomwe nenomwe dzemadhizaini ekugadzira. Zvakatitorera nguva yakareba kuti timire padanho repasi rese. Sezvo China iri kuramba ichiwedzera kusimba, musika weChinese uri kuwedzera kuve wakakosha kune mamwe mabrands mhiri kwemakungwa, maChinese tsika zvinhu zvinogamuchirwa uye zvinoyemurwa nevanhu vazhinji munyika. Nechinangwa chekuunza chiChinese tsika zvinhu kune yepasirese dhizaini, BXL Creative iri uye ichagara iri munzira.
Zvadaro: BXL Yakagadzira Packaging Guizhou Fekitori Yakasainwa!